N'ogbe COVID-19 IgG / IgM Rapid Test Cassette (ọla kọpa Colloidal), COVID-19 IgG / IgM Rapid Test emepụta na ndị na-eweta ya | HEO
Ezigbo, dị irè, nke a na-ejikarị.
1. [Ejiri mee 1]
Cassette COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette bụ akụkụ na-aga n'ihu na-egbochi immunoassay ezubere maka nchọpụta qualitative SARS-CoV-2 nucleocapsid antigens na nasopharyngeal swab na oropharyngeal swab site n'aka ndị mmadụ na-enyo enyo na COVID-19 site n'aka ndị ọrụ ahụike ha.
2. [Nchekwa na kwụsie ike]
Chekwaa ka a na-etinye ya na obere akpa akara na ọnọdụ okpomọkụ (4-30 ℃ ma ọ bụ 40-86 ℉). Ngwa a kwụrụ chịm n'ime ụbọchị njedebe nke edepụtara na aha.
Ozugbo mepee obere akpa ahụ, a ga-eji ule ahụ n'ime otu elekere. Exposurenọgide na-ekpughere ọnọdụ na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ ga-eme ka ngwaahịa na-emebi.
LOT na ụbọchị ngafe ka edepụtara na labeling.
3. Nchịkọta Ihe Nlereanya
Nasopharyngeal swab ịlele
Tinye ntanye minitip na oghere na-agbanwe (waya ma ọ bụ plastik) site na imi imi ya na palate (ọ bụghị n'elu) ruo mgbe a ga-enwe nguzogide ma ọ bụ ebe dị anya dịka nke ahụ site na ntị ruo n'oghere imi nke onye ọrịa, na-egosi kọntaktị na nasopharynx. Swab kwesịrị iru omimi ka nke dị anya site n'oghere imi ruo na mpụga oghere nke ntị. Jiri nwayọ ete ma gbanye swab ahụ. Hapụ swab n’ime ọtụtụ sekọnd iji banye ihe nzuzo. Jiri nwayọ wepụ swab ka ị na-atụgharị ya. Enwere ike ịnakọta otu akụkụ si n'akụkụ abụọ na-eji otu swab, mana ọ dịghị mkpa ịnakọta ụdị si n'akụkụ abụọ ma ọ bụrụ na minitip jupụtara na mmiri site na nchịkọta mbụ. Ọ bụrụ na septum ma ọ bụ mkpọchi gbagọrọ agbagọ na-eweta ihe isi ike inweta mkpụrụ osisi ahụ site n'otu imi, jiri otu swab ahụ nweta mkpụrụ ahụ n'aka imi nke ọzọ.
Fanye swab n'ime azụ pharynx na mpaghara tonsillar. Ghichaa ma ogidi oghe ma nke na-esote oropharynx ma zere ịmetụ ire, ezé, na chịngọm aka.
Mgbe anakọtara ụdị Swab, swab nwere ike ịchekwa ya na mmịpụta mwepụta enyere na kit. Enwekwara ike ịchekwa site na itinye isi swab n'ime ọkpọ nke nwere 2 ruo 3 mL nke ihe nchekwa nchekwa nje (ma ọ bụ ihe saline isotonic, ngwọta ọdịbendị anụ ahụ, ma ọ bụ nchekwa nchekwa).
[Nkwadebe ndị ọkachamara]
1. Mepee mkpuchi nke ihe mmegharị. Tinye ihe ntinye ihe ntanye ihe ntanye n'ime tube mmịpụta, ma tinye ya na ebe ọrụ.
2.Insert the swab sample n'ime mmịpụta tube nke nwere mmịpụta reagent. Nyefee swab ahụ ma ọ dịkarịa ala ugboro 5 ka ị na-agbanye isi megide ala na akụkụ nke tube mmịpụta. Hapụ swab na mmịpụta tube maka otu nkeji.
3.Repụ swab ahụ mgbe ị na-apịpụta akụkụ nke ọkpọkọ ahụ iji wepụ mmiri mmiri si na swab. A ga-eji ihe amịpụtara mee ihe nyocha.
4. Tinye ntinye mkpụrụ mmiri n'ime tube mmịpụta ahụ.
(Ihe osise a bụ maka ntụaka naanị, biko rụtụ aka n'ihe eji eme ihe.)
1. Hapụ ngwaọrụ nyocha na ihe nlele iji dozie ọnọdụ okpomọkụ (15-30 ℃ ma ọ bụ 59-86 ℉) tupu ule.
2. Wepu casset ule site na obere akpa ejiri.
3.Regharịa mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ ahụ, na-ejide eriri ntinye mpempe akwụkwọ, kwụnye 3 tụlee (ihe dị ka 100μL) na ụdị nke ọma (S) nke kaseti ule, wee malite ngụ oge. Lee ihe osise n'okpuru.
4. Chere ka agba agba ga-egosi. Kọwa nsonaazụ ule na minit 15. Agụla nsonaazụ mgbe nkeji iri abụọ.
[Nkọwa nke nsonaazụ]
Positive: * Abụọ ahịrị pụtara. Otu akara agba nwere ike ịdị na mpaghara nchịkwa (C), na akara ọzọ pụtara na agba dị n'akụkụ kwesịrị ịdị na mpaghara ule (T). Ihe dị mma maka ọnụnọ SARS-CoV-2 antigen nucleocapsid. Nsonaazụ dị mma na-egosi na ọnụnọ nke nje antigens mana njikọta ahụike na akụkọ ihe mere eme na ozi nyocha ndị ọzọ dị mkpa iji chọpụta ọnọdụ ọrịa Ọrịa dị mma anaghị achịkwa ọrịa nje ma ọ bụ nje nje ndị ọzọ. Onye ọrụ ahụ achọpụtara nwere ike ọ gaghị abụ ihe kpatara ọrịa.
Ajọ: Otu akara agba dị na mpaghara nchịkwa (C). Enweghị akara na-egosi na mpaghara ule (T). Nsonaazụ na-adịghị mma bụ ihe atụ. Nsonaazụ nyocha na-adịghị egbochi ọrịa ma ekwesighi iji ya dị ka naanị ihe ndabere maka ọgwụgwọ ma ọ bụ mkpebi nchịkwa ọrịa ndị ọzọ, gụnyere mkpebi nchịkwa ọrịa, ọkachasị ọnụnọ nke akara ngosi na mgbaàmà kwekọrọ na COVID-19, ma ọ bụ na ndị nọworo na kọntaktị na nje virus ahụ. A na-atụ aro ka nsonaazụ ndị a gosipụta site na usoro nyocha ngwungwu, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, maka njikwa ọrịa.
Na-ezighi ezi: Usoro nchịkwa adịghị apụta. Ezughi oke maatụ ma ọ bụ usoro usoro ezighi ezi bụ ezigbo ihe kpatara kpatara njikwa njikwa. Nyochaa usoro a ma megharịa nyocha ahụ site na iji kaseti nyocha ọhụrụ. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ dịgidere, kwụsị iji nza ahụ ozugbo wee kpọtụrụ onye na-ekesa gị.
Nke gara aga: COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette Corona Virus Rapid Test Kit
Osote: HCV Rapid Test Cassette / warara / kit (WB / S / P)
coronavirus IgGIgM Otutu Ule
Nyocha COVID-19 IgG / IgM
COVID-19 IgG / IgM Nnwale Ule Cassette
IgGIgM Nnwale Ọsọ
COVID-19 Influenza A + B Antigen Combo Nnwale Ọsọ ...
COVID-19 Antigen Rapid Nnwale Cassettes